Sawir 3D bilowga ah: software model ugu fiican | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | | General, dhowr
Sawirka 3D ayaa nolosheenna ka soo muuqday horumarinta tignoolajiyada. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa hore gacanta loogu sawiray, laakiin waxay u baahdeen garaafyo badan si ay u horumariyaan una koraan.
Taasi waa sababta qoraalkan saddex-geesoodka ah, Waxaan ku siineynaa fursad aad wax badan uga barato sawirka 3D, Taas awgeed, waxaanu kuugu diyaarinay qalab taxane ah oo kaa caawin doona inaad noloshaada cusub ku bilowdo qaabkan sawir-gacmeedka ah ee marxaladda udub dhexaad u ah sanadihii ugu dambeeyay.
Ma rabno inaan sii dheeraano sababtaas awgeed waxaan dooneynaa inaan horey kuugu sharaxno waxa qaabka sawirku yahay iyo sababta ay muhiim u tahay inaad barato.
1 sawir ama naqshad 3D
2 Software-ka 3D ee bilowga ah
2.2 Sketch up Samee
2.4 Xannaanada xoolaha
2.6 Dharbaaxo 3D
3 Farshaxannada 3D iyo naqshadeeyayaasha
3.1 ilmo weyn
sawir ama naqshad 3D
Xigasho: daabacayaasha 3D
Tignoolajiyada 3D waa nooc ka mid ah tignoolajiyada asal ahaan ka yimid Maraykanka iyo in muddo ka dib, lahaa wax badan oo caan ah dalal kala duwan. Waxay bilaabatay 1915-kii waxaana la saadaaliyay sawiradii 3D ee ugu horreeyay iyo garaafyada.
Dhawr sano ka dib inta u dhaxaysa nalalka iyo hadhyada, 1980kii IMAX ayaa soo baxay, shirkad mas'uul ka ah soo saarista filimada qolalka si gaar ah loogu talagalay 3D. Falcelinta yaababka leh ee horumarka weyn ee tignoolajiyadan ayaa ka dhacday adduunka oo dhan. Laga bilaabo wakhtigaas, waxaa la bilaabay qalabyo u keenay 3D adduunka.
Software-ka 3D ee bilowga ah
La abuuray 1995, Blender waa software qaabaynta 3D dhamaystiran, oo aad looga jecel yahay aduunka animation iyo video mahada leh sifooyinka badan ee ay bixiso. Ma aha oo kaliya bilaash, laakiin sidoo kale il furan, taas oo macnaheedu yahay in si joogto ah loo hagaajiyo. Waxay u ekaan kartaa xoogaa adag laakiin aad bay faa'iido u leedahay haddii aad si degdeg ah ugu baahan tahay inaad bilowdo naqshadaynta 3D.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu soo jiidashada badan ee Blender waa in ay taageerto dhammaan dhuumaha 3D, oo ay ku jiraan qaabaynta, animation, jilidda, samaynta, dabagalka dhaqdhaqaaqa, iwm. software Tani waa cross-platform iyo Waxaa laga heli karaa kombiyuutarada Linux, Windows iyo Mac.
Waxay ku salaysan tahay qaabaynta laba geesoodka ah, daruuri maaha xalka ugu badan ee loo isticmaalo qaybta wax soo saarka, laakiin waxay u ogolaataa dhoofinta moodooyinka 3D ee qaababka ku habboon farsamada.
Sketch up Samee
Sketchup Mak, oo hore loo yiqiin SketchUp, waxaa loogu talagalay 2000 LastSoftware si loogu isticmaalo naqshadaynta naqshadaha, hadda waxaa leh Trimble Navigation LLC.
Barnaamijka Sketchup waa bilaash wuxuuna bixiyaa qalab fudud isticmaalayaasha kala duwan: soosaarayaasha, naqshadeeyayaasha, naqshadeeyayaasha, injineerada iyo waxdhisayaasha. Barnaamijkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud u sawirto fikradahaaga qaab 3D ah.
Kahor intaadan bilaabin abuuristaada, waxaad dooran kartaa qaab-dhismeedka kugu hagaya habka qaabaynta oo dhan. Waa software 3D ah oo aad u wanagsan, kaas oo ilaalinaya dheelitirnaan wanaagsan oo u dhexeeya isticmaalka iyo shaqeynta, ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay bilowgayaasha kuwaas oo dhab ka ah barashada CAD.
sculptris waxay u isticmaashaa farshaxan dhijitaal ah oo saldhig u ah si ay u abuurto qaab 3D ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaad awoodi doontaa inaad abuurto moodooyinkaaga 3D adiga oo ku qaabaynaya mesh kasta oo leh burush kala duwan.
Abuuritaanka qaabkaagu wuxuu la mid noqon doonaa qaabaynta shay adoo isticmaalaya dhoobo. Software-kani waxa uu ku bilaabmayaa goob ahaan, markaas isticmaaluhu waxa uu u qaabayn karaa sida la rabo isaga oo iskala jiidaya, qodaya, simaynaya, iwm. Tani waxay ka dhigaysaa qalab ku habboon marka la abuurayo jilayaasha firfircoon ama ciyaaraha fiidiyowga.
Sidoo kale, haddii ay dhacdo inaadan garanayn, Sculptris waxaa iska leh Pixologic, abuuraha Zbrush. Waa software 3D u fiican kuwa bilowga ah, hadda ma sii socoto, wali waad soo dejisan kartaa, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan la socon nidaamyada cusub ee hawlgalka.
Vectary waa aalad qaabaynta 3D online ah kaas oo aad ku abuuri karto, la wadaagi karto, oo aad ku habayn karto naqshadaha 3D. software this waa isku darka qaabaynta mesh caadiga ah, qaabaynta qayb-hoosaadka, iyo plugins parametrics.
Waxaa laga dhisay dhulka si ay u qaabaynta 3D u fududaato kuwa bilawga ah, laakiin sidoo kale waxay faa'iido u yeelan kartaa xirfadlayaasha. Intaa waxaa dheer, moodooyinka waxaa lagu keydiyaa daruuraha, halkaas oo laga heli karo browser kasta, isticmaalayaashu waxay si fudud u heli karaan abuurkooda waxayna wadaagaan moodooyinkooda meel kasta oo adduunka ah.
Clark waa qaabaynta 3D, animation iyo software soo bandhigida Daruur ku salaysan oo si buuxda u sifaysan oo ka dhex shaqeeya biraawsarkaaga.
Xalkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto moodooyin 3D adag, abuurto sawir-qaadis sawireed oo cajiib ah oo la wadaagto adigoon ku rakibin wax software gaar ah. Barashadu maaha mid aad u adag, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon isticmaalayaasha aan khibrad badan u lahayn goobtan naqshadeynta.
Software-kan, 3D geometry waxa uu ka kooban yahay walxo kala duwan, oo loo yaqaan qaybo. Saddexda qaybood ee kala duwan waa wejiyo, geeso, iyo geeso.
3DSlash waxaa abuuray 2013 Silvain Huet, kaas oo uu dhiirigeliyay wiilkiisa oo ciyaaraya ciyaarta fiidiyoowga ah ee Minecraft, ciyaar ay tahay inaad ku noolaato adduunyo lagu abuuray xabado yaryar. 3Dslash, sida Minecraft, waxay isticmaashaa awooda baloogyada yaryar oo aad ka saari karto ama aad ku biiri karto si ay kaaga caawiso abuurista qaabkaaga 3D.
Software-ku wuxuu bixiyaa qalabyo kala duwan oo kaa caawinaya qaabaynta naqshadahaaga, oo ay ku jiraan awoodda lagu beddelo qaybo ka mid ah xaqiiqada 3D oo leh sawir kaliya oo aad si fudud u dhejiso oo aad raad raacdo.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay xallinta ilaa 0.1 mm, taas oo ah, barnaamijkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad si sax ah u sameyso shaygaaga, kaas oo kuu ogolaanaya inaad keento xaqiiqooyinka hal-abuurka ah ee nolosha.
Software-kan 3D waxaa si gaar ah loogu sameeyay ujeeddooyin waxbarasho, horumarintiisa waxaa loo sameeyaa si qof kastaa u isticmaalo OpenSCAD, software CAD xirfad badan.
Awaamiirta horumarinta walxaha iyo isbeddelkooda waxaa lagu soo bandhigaa blocks midab leh, oo xusuusinaya qalabka dhismaha ee caanka ah, LEGO. Koodhka 'BlocksCAD code' wuxuu si buuxda ula jaan qaadayaa OpenSCAD si aad halkaas ugu dhejin karto taabashada moodooyinkaaga.
Qaababka dhoofinta waxay noqon karaan OpenSCAD ama STL. Si loo hubiyo in qof kastaa baran karo sida loo isticmaalo software-ka, BlocksCAD waxay leedahay kanaalka Youtube oo leh casharro kala duwan oo ku saabsan qaabka 3D.
Farshaxannada 3D iyo naqshadeeyayaasha
Xigasho: ku xigeenka
Halkan waxaan kuugu dayn taxane fanaaniin ah si ay kuugu dhameeyaan dhiirigelinta:
Grand Chamaco waxaa loo arkaa mid ka mid ah fanaaniinta 3D ugu kacaanka. Waxa uu ku dhashay magaalada Mexico, waxa uu gadaashiisa ku dhuuntaa maaskaro qarinaya aqoonsigiisa balse aan ahayn tayadiisa.
Waxa lagu garto fannaankan ayaa shaki la'aan ah inuu awood u leeyahay inuu abuuro jilayaal loo qaabeeyey laguna abuuray aaladaha 3D. Waxa sidoo kale lagu gartaa shaqooyinkiisa waa noocyada kala duwan ee midabada uu isticmaalo, maadaama uu yahay farshaxan jecel inuu ku ciyaaro midabyo iyo midabyo.
Xigasho: Shineemo Funniest
Yanick, waxaa loo arkaa mid ka mid ah farshaxanada dhijitaalka ah ee ugu wanaagsan warshadaha filimada. Waa khabiir wuxuuna la shaqeeyaa qaabka farshaxanka farshaxanka fikradda.
Sidoo kale waa khabiir ku takhasusay rinjiyeynta matte iyo 3D. Intaa waxa u dheer, waxa uu bartay oo qaatay tabobar tacliineed oo heersare ah oo ku salaysan sawir-farsamo iyo saamaynta dhijitaalka ah, taas oo ah dhab ahaan waxa uu hadhow naftiisa u huri doono, sannado ka dib.
Waxa uu caan ku yahay agaasinka wax soo saarka sida gudbiyeyaasha, Star ugu celiso, Indiana Jones: Boqortooyada Crystal Skull), War Caalamka, Wars Star: Qaybta III, Burcad-badeedda Kariibiyaanka, Terminator III, Labada Taleex, Titan AE kuwo kale oo badan.
Iyadu waa sawir-qaade iyo naqshadeeye ku takhasusay abuurista jilayaasha. Cecy waa khabiir ku takhasusay qaabaynta 3D, abuurista sheekooyin ay la socoto qaybaheeda, waana qof jecel muusigga.
Hadda waxa uu fulinayaa riyadiisii ​​ahayd in uu wax soo saaro alaabta lagu ciyaaro fanka oo leh naqshadihiisa: isaga oo kaashanaya Magalaxy Toys, wuxuu bilaabay sawirka sofubi ee ugu horreeya kaas oo bilaabi doona ururinta jilayaal badan oo badan.
Waxay shaki la'aan tahay mid ka mid ah naqshadeeyayaasha 3D ee ugu caansan xilligan.
Waxaa lagu tiriyaa naqshadeeye xirfad ahaan oo aad u jecel VFXgaar ahaan qaabka nalal.
Waxa uu ka shaqeeyay xayaysiisyada oo uu la kaashaday noocyada ay ka mid yihiin Autodesk iyo Nvidia, iyo sidoo kale wax soo saarka sida Dead Socodka The, Ka cabso Dhimashada Socodka, Geesiyaal Dhalasho ama nuxurka asalka ah ee Netflix ee ugu horreeya ee Mexico, Naadiga De Cuervos.
Shaqadiisu waxay had iyo jeer u qaadatay iftiin sida walxaha mugga leh ee keena xaqiiqada muuqaalkiisa 3D.
Naqshadaynta 3D waxay hadda u gudubtaa dhinacyo badan, qaar badan ayaa u heellan samaynta iyo qaabaynta walxaha, halka qaar kalena ay adeegsadaan sawir oo ay u beddelaan farshaxan dhab ah oo ka baxsan garaafyada.
Hubaal kaama rogi karno sawir 3D xirfad leh. Waxaanse hubnaa in qoraalkan aanu kugu soo dhawaynay hadafkaaga xiga.
Waxaan idiinka tagnay tixdan yar ee fanaaniinta si aad u ogaatid oo aad dib u daawato qaabkaaga, uguna dhiiradaan kuwa ku dhex jira naqshadaynta oo aad ogaato dariiqa aad dooranayso. Hadda waxa la gaadhay wakhtigii aad samayn lahayd baaritaan dhamaystiran oo aad wax badan ka baran lahayd naqshadaynta 3D oo aad u ogolaato hal-abuurka qaybtiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawirada 3D ee bilowgayaasha